Inobhadhara Pamwe Kushandura Amazon kushambadzira kunokosha kudyara?
Vatengesi ivavo vanoda kuwedzera kutengesa kwavo kwepaIndaneti vanogona kubatsirwa nekushandisa Amazon PPC kutambira mutsva. Iyi purogiramu yeAmazon yakanyatsogadzirwa uye yakagadzirirwa kupa vatengesi vemuIndaneti nemikana yose yekuita mamwe maitirwo uye kuwedzera mararamiro ako ehupenyu.
Muchikamu chino, tichakurukura mazano ePPC ekugadzirisa maitiro ako aunogona kushandisa kuwedzera purofisi yako zvakanyanya sezvinobvira kune chikamu chako.
Amazon inobhadhara sei basa rokutsvaga?
Kubvira kubva pakutanga tikurukure kutsvaga kwekubhadhara kweAmazon.
Amazon inowana mamiriyoni ekutsvaga mwedzi woga woga. Vakawanda vavo ndivo vanotenga-vatenge vakagadzirira vanouya kuAmazon neavo vanojekesa kutenga zvavanoda - lampadine e27 a led. Vanongoridza zvavanoda mu Amazon search box, uye tsvakurudzo inovapa iyo inonyanya kukosha kumiti yavo yemibvunzo iyo inofunga kuti inogona kugutsa chishuvo chomushandi. Izvozvo zvinoguma zvinogona kuonekwa sechikafu. Zvisinei, kunewo mahomwe emigumisiro yekutsvaga vatengesi vanogona kuona pahotera yakarurama kana pasi pemigumisiro yehupenyu. Izvi zvinotsigirwa Amazon maiti ane mikana yose yekuve yakatengwa zvakanaka sezvavari kuonekwa kune vavanenge vachitarirwa vane chinangwa chokuvatenga.
Maererano nemushandirapamwe uyu, iwe unofanirwa kubhadhara pamusana pekushandiswa kwemunhu pane ad ad yako. Zvakanaka zvikuru zvakafanana neGoogle. Iko mari yekutengesa imwe neimwe inogona kusiyaniswa kubva kune imwe yemisika yemisika kune imwe. Zvisinei, kana iwe uine nzira yakanakisisa yekushandisa Amazon yako kubhadhara-per-click campaign, iwe uchawana yakakwirira kudzokera kumariko.
Kuita zvinhu zvose zvakarurama, unoda kukudziridza urongwa hwako hwokutsvaga uye unoenda mumatambudziko ose usati watanga kuzivisa.
Sezvo mutemo, kukunda kushandiswa kwekugadzirisa maitiro kunofanirwa kuve nematanho anotevera:
kuita tsvakurudzo yekutsvaga kutsvaga kutsvaga kutsvaga mazwi anotendeukira kukutengesa;
kuderedza pasi rondedzero yemashoko ako ekutsvaga, kubvisa zvose zvisiri kushandura mazwi makuru;
kuwedzera mabhizimisi emashoko ekutsvaga anochinja zvakanaka.
Essential Amazon advertising metrics
Advertising cost of sales - the percent of the estimated sales spent on advertising. Iwe unogona kuverenga zvivako zvekutengesa zvekutengesa nekuparadzanisa kushandiswa kwemutengo wevose kushambadzira kunosanganiswa.
Yakagadzirwa kutengeswa - nhamba yose yekutengesa kwezvinhu zvakagadzirwa mukati mevhiki imwe yekutsvaga pane zvekutsvaga kwako mukutsvaga. Iwe unogona kutarisa hutengo hwako hwekutengeserana kwezvinhu zvakashambadzirwa nezvinhu uye zvimwe zvinhu mumushumo weKampaign Performance.
Zviratidzo - iyi metric inoratidza kuti nguva dzakawanda sei matanho ako akaratidzwa ku Amazon kutsvaga. Zvose zvinoshandiswa pakushandura nguva yekupedzisira zvinogona kugadziriswa nekuda kwekutsvaga kusavharwa.
Kushandura - nhamba yenguva yako matanho akaiswa. Zvakaoma chaizvo kubvisa zvisizvo zvisina kuwanikwa kubva mushumo wekutsvaga.
Gwaro rekufamba nechekuita maitiro ekuumba Amazon PPC campaign
Gadzirira rondedzero yako
Chinhu chokutanga chaunofanira kuita musati watanga Amazon pay-per-click advertising campaign yakagadziridzwa yako kuverenga maererano nehutano Amazon inoda. Izvo hazvina musoro kuti zvive nemigwagwa pane zviduku zvinotyisa zvinotarisa. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kushanda pane chimwe nechimwe chekunyora kwako, kupedza zvose masimi uye kuvabatsira nekutsvaga kutsvaga mazwi. Iva nechokwadi chekukwevera mazwi ose ekutsvaga aunenge uchitarisa pane imwe nzvimbo pakurongeka kwako (muchimbo, bullet points, tsanangudzo yemagetsi, nezvimwe.)
Unofanira kubhadhara zvakanyanya kunaka kwezvifananidzo zvako. Bvunza nyanzvi yemufananidzo kuti atore mifananidzo yezvinhu zvako uye akazvigadzirire achitevera Amazon mazano (mutsvuku, 85% yemufananidzo unozvipira kune chigadzirwa, kusarudzwa kwepamusoro, kukwanisa kudhinda). Uyezve, iwe unofanirwa kubata tsanangudzo huru dzekugadzirwa kwezvinhu zvaizoita kuti unyore pane zvigadzirwa zvemugadziri wako uye zvikamu zvekutanga. Uye pakupedzisira, unofanirwa kuwana mamwe maitiro akanaka. Ongororo inoshanda seyiyo inonyanya kukosha kuAmerica kubatsira vanotengesa kuti vaite zvavanenge vasarudza. Izvo zvinonzi "trust factor" kuAmazon inogona kuchinja zvakananga yako zvigadzirwa kutendeuka.
Sarudza rudzi rwakanaka rwekutengesa
Kune marudzi maviri ekutengeserana kuAmazon - iyo inotumira vashanyi kuwebsite yako (Amazon Product Ads ); uye imwe iyo inovatumira kune yako yakagadzirwa mukati meAmazon (Amazon Sponsored Products).
Kana uchida kuita michina yako ichioneka kuAmazon, zvine musoro kushandisa Amazon Sponsored Products ad. Muchikamu ichi, tichataura nezvemhando iyi yeAmangiti inozivisa.
Maererano nemushandirapamwe uyu, unogona kusimbisa zvinhu zvako muma Amazon mukati mitsva yekutsvaga mazwi ekutsvaga zvinhu zvako zvingave zvisina kumira. Zvisinei, kana iwe uine hutano hwakakosha hwemashoko aya ose, iwe uchawana kaviri kubudiswa.
Kana uri mutsva kuAmazon platform, Amazon Sponsored Products campaign inokupa kukurudzira kukuru, kuratidza zvinhu zvako zviri pamberi pevangangodaro vatengi. Kunze kwezvo, inogona kukubatsira kuti uwedzere huwandu hwehupenyu hwako kuAmazon SERP, uchikwevera kune dzimwe nzira dzinofanirwa kuendesa kumapeji ako ezvigadzirwa.
Ita yako yekutsvaga mutsva
Zvino unoziva maonero ayo Amazon Sponsored Products advertising campaign. ndiyo nguva yekuumba yako yekutanga muAmazon. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nzira yekuzviita nayo nyore uye nokukurumidza.
Kugadzirisa matanho ako ekutsvaga, unofanira kuenda kuAmazon Seller Central uye sarudza Campaign Manager sarudzo. Pano iwe uchawana bhokiti "Dza Campaign. "Unofanira kufanidza pairi kuti utange. Pano iwe unofanira kuumba zita remushandirapamwe wako uye kuronga bhajeti yezuva nezuva iwe unogona kutenga. Iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya zita remushandirapamwe wako nokuti gare gare apo iwe uchange uine mishandirapamwe mune imwe nhoroondo, iwe unogona kutengesa nayo.
Sekutonga, kutendeuka kwako pamishonga kunotanga pasi. Zvisinei, nekufamba kwemazuva, iyi yezinga iri kuwedzera. Kana izvozvo zvikaitika, mari yako yekukwira ichave yakaderera kupfuura pakutanga. Ndicho chikonzero nei zvisinganyanyi kurongedza kuzviisa pakarepo.
Sarudza rudzi rwekutsvaga
Kune marudzi maviri ekutsvaga muAmazon advertising campaign - automatic and manual. Ndinokukurudzira kuti ushandise zvinyorwa zvinotungamira sezvo zvinopa hutungamiri hwakakwana pasi pekutsvaga kwako kwekutsvaga uye kunokupa mukana wekutarisa mazwi ekufunga iwe anofanirwa nebhizimisi rako.
Kuzvitsvakira zvakananga kunonzwisisika kana iwe usingadi kuisa nguva yako nekuedza muma Amazon yako kudhinda. Munyaya iyi, unogona kuvimba zvachose neAmazon research system. Inogona kuva nzira inofadza yekuwana mazano matsva emazano pasina kushandisa chero zvimwe zvishandiso. Pano iwe unogona kuona mamwe mazwi ekutsvaga iwe usina kumbofunga kuti unotarisa.